Varotra: miakatra ny fanjifana solika | NewsMada
Miverina miakatra tsikelikely ny fanjifana solika eto Madagasikara, nanomboka ny volana aogositra, rehefa nohalefahana ny fihibohana, indrindra hatramin’ny fisokafan’ny fitaterana. Mbola tsy misy antontanisa mazava avy amin’ny OMH momba izay fiakaran’ny fanjifana izay fa samy nanamarika izany kosa ny toby fivarotan-tsolika samihafa.
Eto an-dRenivohitra, toby iray nanaovana fanadihadiana avy hatrany, nitombo 15 % ny fanjifana gazoala, raha vao niverina ny fitateram-bahoaka ny fiandohan’ny volana septambra, misy ambonin’izany any amin’ny toby lehibe sasany. Manamarina izany ny kaoperativa mpitatitra maro, saingy nanamarika koa izy ireo fa tsy afaka mihitsy ny fitohanan’ny fifamoivoizana, mandany fotoana sy gazoala fotsiny, nefa mbola ho ela vao tafarina.
Tsiahivina fa nihena 40 % ny fanjifana solika, ny volana mey, vao mainka nihena 50 – 60 % ny volana jona sy jolay. Tsy nampidina ny vidin-tsolika anefa izay fanjifana nihena izay. Raha ny fanazavan’ny Praiminisitra Ntsay Christian, mbola misy volan’ireo kaompania mpaninjara solika ireo amin’ny fanjakana, antony tsy mampidina azy. Antsipiriany maro ny mamaritra ny vidin-tsolika : masonkarena tonga eny amin’ny seranana (57%), fitaterana sy tahiry (8 %), fitsinjarana (12 %), hetra sy haba (30%).
Salanisa amin’ny ankapobeny ireo fa samy manana ny azy ny solika fandrehitra, ny lasantsy, ny gazoala. Miainga avy amin’izay ny kajy rehetra sy ny tombom-barotra, manome ny vidiny ho an’ny mpanjifa. Tamin’ny 20 jona 2019 ny vidin-tsolika, amin’izao fotoana izao. 70 dolara ny baril iray tamin’izany teny amin’ny tsena iraisam-pirenena, hatramin’ny nisian’ny Covid-19, efa nisy fotoana tafidina 10 dolara, ankehitriny manodidina ny 40 dolara.